eji mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-emepụta ihe dị iche iche - Tanzania Crusher
Tanzania Crusher>>osisi na-agbagharị agbagharị>> eji mobile crusher osisi soplaya na dubai
eji eme ihe na-eme ka a na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na ya. belt ebu, onye na-enye nri ọkụ, ihe eji ebu oku ezigara ya nkuku uhie, nkpọchi mmetụta, nnyeghari hydraulic bụ ihe na-eme ka a ghara ikpuchi ya, nke abụọ nke a obere jawcrusher, ihe na-esi ísì nyochaa nke atọ nke atọ na-ekpuchi jijiji na ihuenyo gbakwunyere nkọwa zuru oke nke ore ahụ na-eburu ya igwe mgbidi, igwe na-edozi Ngwọta nlekọta ọgwụ dị mma ndị na-arụ ọrụ magnet, igwe onu mmiri họrọ ọtụtụ ụdị mkpa ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a, ọ bụ naanị ọrụ nhazi ọ bụla, Shanghai XSM dabere n'ụdị ụdị gị bụ ngwá ọrụ m kachasị mma, Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, anyị ga-akpọtụrụ anyị ma ọ bụ pịa aka nri akụkụ nke akara ngosi akara, ndị ọrụ anyị na-ahụ maka ịchọrọ gị azịza zuru ezu.
Xuanshi bụ onye na-ebute sistemụ ụwa na onye na-emepụta osisi mkpịsị osisi. Ngwurugwu nke ngwọta na nyocha na-enye ndị ahịa ndị dịgasị iche iche ngwa na arụmọrụ dị elu. Ngwongwo ngwa ngwa a na-agbagharị agbagharị na-agụnye ihe nkedo na-egbuke egbuke, ihe nkedo cone na mpempe ihe ndị ọzọ.
Ndị na-agbagharị ụgbọala na-arụ ọrụ dị arọ na-ejikọta oke agagharị na oke arụpụtaghị ihe, na-enweghị ngbanwe nke ọrụ. Ebumnuche nke a mepụtara maka nhazi nke ịnweta nchịkwa na ebe a na-ebubata ebe obibi, ụlọ ọrụ nchịkọta na nsị nke ala, ha egosila na ha bara uru na ụlọ ọrụ ndị na-ewu ụlọ nke abụọ na nchịkọtaghachi.
Eji Mobile Crusher na Dubai
Maka obere ndị ọrụ na-etipịa ihe, bụ nke na-enweghị ike ịkwalite nnukwu ego maka ngwá ọrụ ọhụrụ zuru ezu, a na-ejikwa ndị na-agbagharị ụgbọala na Dubai na-ere ahịa na ọnụ ala dị elu. Ọ bụ na ọnụ ala na arụmọrụ dị mma. Anyị na-enye akwụkwọ ikike ndụ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ.
A na-eji ngwa igwe eji eme ihe na Dubai na ngwa ngwa. Ihe ndị a na-esite n'iwepụta ihe ngwa ngwa ngwa ngwa dị ka granite na limestone, ọrụ owuwu nke na-eme ihe na mgbochi, iji mee ihe ngwa ngwa ma kwatuo ngwa.
Nkume Nkume nke Nkume Nkume
Ihe nkedo a na-achikota na-ejikọta nnukwu ngwa ngwa, imeghari, mgbanwe nke ọrụ, nlọghachi ngwa ngwa na ego, na nnukwu ihe mmepụta ihe. Ọ na-enye nnukwu ọnụ ọgụgụ nke ihe onwunwe na akwa akwa akwa akwa, ma ka nwere ike ịnakwere nnukwu ihe oriri.
Ihe nkedo a na-eme ka mpempe igwe bụ ihe dị ukwuu, ike dị elu, ikuku kpụkọrọ nke abụọ nke nwere ike ịmepụta ngwaahịa zuru ezu site na ihuenyo ngwaahịa ma mechie ọrụ.
Mgbasa mgbochi mkparịta ụka na-adabara adaba maka ikpo nkume siri ike dị ka nkume ala mmiri na ihe onwunwe niile nke ịnweta ihe onwunwe, dịka brik, asphalt na concrete.
Mkpọpị mmetụta nwere ike imezu ikike imebi ruo 200 ka 1500 tf.
← igwe nkpu nkume maka ire ere tanzania
kianite mining equipment na nigeria →